पाँच वर्षीय बालकसहित थप दुई जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि, मृतकको संख्या १८ पुग्यो — onlinedabali.com
पाँच वर्षीय बालकसहित थप दुई जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि, मृतकको संख्या १८ पुग्यो
काठमाडौँ । नेपालमा थप दुई जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । दुबैको मृत्युपछि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो ।
बाराको निजगढ–६ का ५ वर्षीय बालक र वीरगञ्जकै घण्टाघर क्षेत्रमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको युवाको शव परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ ।
वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बालकको शुक्रबार साँझ मृत्यु भएको थियो । अस्पतालमा दुई पटक आरडीटी परीक्षण गर्दा दुवै रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको थियो । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि बालकको शुक्रबार राति पिसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायले बताए ।
निमोनिया कारण सिकिस्त बनेका बालकलाई परिवारले निजगढमा दुईवटा निजी क्लिनिकमा उपचारको लागि लगिएको थियो । निको हुने सम्भावना नभएपछि त्यहाँबाट टेम्पोमा राखेर निजगढकै सामुदायिक प्रसूति अस्पतालमा लगिएको थियो । त्यहाँ पनि उपचार नभएपछि एम्बुलेन्समा राखेर वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा ल्याइएको थियो । बिहान ११ बजे आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएका बालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
अस्पतालका सञ्चालक डा. अबुल हैस अन्सारीका अनुसार बालकको शव नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ । अन्तिम संस्कार गर्ने तयारी भइरहेको छ । बालकको मृत्यु कोरोना भएको पुष्टि भएसँगै निजगढ बजार बन्द गरेको नगर प्रमुख सुरेश कुमार खनालले बताए ।
योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८ पुगेको छ । यद्पी सरकारले औपचारिक रुपमा घोषणा गरिसकेको छैन । आज दिउँसो नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गर्न सक्ने बताइएको छ ।